अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली छुर्पीको माग बढ्दो, परम्परागत विधिबाट यसरी तयार पारिन्छ छुर्पी | Public 24Khabar
Home News अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली छुर्पीको माग बढ्दो, परम्परागत विधिबाट यसरी तयार...
अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली छुर्पीको माग बढ्दो, परम्परागत विधिबाट यसरी तयार पारिन्छ छुर्पी
‘प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि, कहाँकहाँबाट निकाल्छन् कि, घरबाट पनि निकाल्छन् कि त्यो उनको कुरा हो । हामी एउटा आन्दोलनमा छौं, हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरु तोकेका छौं । हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । त्यसकारण अहिले समाजवादउन्मुख छौं । समाजवाद उन्मुख भनेको लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाअनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानता, सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने । हामी यस उद्देश्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं, ओलीले भने, ‘ पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन कमरेडहरु । हामीले चाहेर के गर्ने ? अहिले पनि चाहेका छौं ।
उहाँहरुले जस्तो कसैलाई निस्कासन गरेर कुदिरहेका छैनौं । उहाँहरु यति उपद्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति अन्तरघात गर्दै हुनुहुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिग्रहको खेती गरिरहनुभएको छ । तर, पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छैनौं । आफैं उहाँहरु किनारा लाग्दै हुनुहुन्छ । त्रिशुलीमा तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, केही केही चिज नदीमा पर्‍यो भने त्यो बग्दै जाँदा किनारा किनारातिर लाग्छ । नदी बग्दै जाँदा फोहोरहरु किनारातिर धकेलिँदै जान्छ र सफा हुँदै अगाडि जान्छ । भन्न त नहुने हो, नमिले पनि जीवन शर्माको एउटा गीत सम्झिनुपर्‍योजस्तो लाग्छ, पिलो निचोरिँदैमा वजन घटेको हुन्न ।’ पिलो निचोरिन्छ, त्यसको खिल बाहिर जान्छ । वजन घटेको हुन्न ।
पार्टी एकतापछि महाधिवेशन गर्ने र एकतालाई संस्थागत गर्नेतिर भन्दा पद र सत्तातिर केही साथीहरू केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘हामीले एकीकरण गर्‍यौं । तीन महिनाभित्र एकीकरणको काम टुंग्याउने निर्णय गरेका होइनौं ? त्यो तीन महिना कहिले आउँछ ? त्यतापटि्ट कहिल्यै ध्यान गएन । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका हौं । गएको जेठ ३ गतेभन्दा उतै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । सम्भवतः विधानको धारा १७ मा होला ।
तर, महाधिवेशन गर्नेतर्फ कुनै सोच छैन । कुनै चिन्ता छैन । तयारी छैन ।त्यसबाहेक, महाअभियोग लगाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष निकाल्ने, अरु नेताहरु निकाल्ने, यो बाटोतिर पो खेती गरिराख्नुभएको छ । पार्टी एकता, एकीकरण टुंग्याउने, एकीकरणको बाटोबाट अघि बढ्ने होइन, बरु उहाँहरु भत्काउने । कसैलाई निष्काशन गर्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने । कुदेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने । कुदेर सभामुखकहाँ पुग्ने । कुदेर कहाँ पुग्ने । यही प्रकारको खेती ।
चुनावमा कम्तिमा ५० लाख लोकप्रिय भोटसहित बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै ओली भने, ‘त्यसकारण हामीले निश्चित समयभित्र लगभग ११ महिनाभित्र अब महाधिवेशन गरिसक्ने विचार गरेका छौं । हामीले चुनावमा पनि जानु छ यसपछि । अब हामी चुनावको तयारीमा जुट्छौं । चुनावमा जान्छौं ।हामी चुनावपछि अरु कामहरुलाई बढी व्यवस्थित गर्नु छ ।
चुनाव अगाडि हामीले कमिटीलाई व्यवस्थित गर्नेर्, विभागहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, मातहतका कमिटीहरुलाई पुनर्गठन गर्ने यावत कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कामहरु गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौं ।चुनावमा हामीले कम्तिमा ५० लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनुपर्ने छ । समानुपातिकमा यति ल्याउनु छ । त्यो ५० लाख भोट हामीले ल्याउनु छ । हामीले दुई पार्टी मिलेर ११६ सिटमा जितेका थियौं । ११६ सिटमा जितेका थियौं भने अहिले त्यसमा ४ सिट थप्नु पर्ने छ । १२० सिट पुग्नु पर्ने छ ।’
अब चुनाव केन्द्रित अभियानलाई आँधी तुफानका रुपमा हाँकेर लैजाने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो अभियान कुन हिसावले हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामी एउटा आँधी तुफानका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछौं । आँधी तुफानका रुपमा हाँकेर लिएर जाँदैछौं । हामी राजनीतिमा सम्पूर्ण ढंगले समर्पित भएर काम गर्छौं । र, हामी सही विचारको, सही उद्देश्यको तागत दुनियाँलाई देखाउँछौं । हामी हाम्रो एकताको बलको, एकतावद्ध सक्रियताको तागत देखाउँछौं ।
हाम्रो व्यापक पार्टी पंक्तिको परिचालन, त्यसको तागत देखाउँछौं । हामी त्यसैगरी जनपरिचालन गर्छौं । त्यसको तागत हामी देखाउँछौं । देशभक्तिमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रवादमा के तागत हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाभिमानमा के तागत हुन्छ ? त्यो हामी देखाउँछौं । हाम्रो स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्ने हाम्रा इमान्दार उद्देश्यहरुको तागत र सुशासन, शान्ति कामय गर्ने हाम्रा नीति र व्यवहारको तागत के हुन्छ, हामी देखाउँछौं ।’
नयाँ परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गरेर विस्तार गर्नुपरेको बताउँदै ओलीले भने, ‘ अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निस्कासन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरु पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो ।मैले ४४१ केन्द्रीय कमिटी, २ जना आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र ४ जना पछि थपियो ।
४४७ जना पहिले केन्द्रीय सदस्य र ५५६ जना मैले हिजो मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्य गरेर १००३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । १९६ जना खाली राखेर ११९९ जनाको कमिटी बनाइएको छ । यो कमिटी पछि हेरफेर हुन्छ ।तसर्थ ११९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । ४४७ पहिलेको र २०७७ पुस ६ गते मैले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको बृहत्ततर हितलाई ध्यानमा राखेर मनोयन गरेका ५५६ जना गरेर यतिबेला १००३ जना मौजुद छौं । पहिला पनि कमिटीहरू यसरी नै बनिसकेपछि स्वअनुमोदन गरिएको हो । अहिलेसम्म भएका कमिटीहरू पनि संक्रमणकालीन कमिटी हुन् ।
Previous articleकुवेतको कोमामै अस्ताइन् २७ वर्षकी श्रम सहचारी विपना
Next articleगुल्मीमा भेटिए लास्टै हसाउने ९ बर्सिय सचिन, गाउन र नाच्न झन तगडा ,काठमाडौ जाने ठुलो रहर Sachin Gulmi